သတို့သမီးနှင့်ရတနာ | HIGH ရတနာအိပ်မက်
အမြင့်ရတနာ ရတနာပုံပြင်များ တော်ဝင်ပွဲ
အဆိုပါသတို့သမီး & ရတနာ
သူမ၏ရတနာမှသည်မင်္ဂလာဆောင်ဂါဝန်အထိ၊ အသစ်ဖန်တီးထားသော Sussex ၏ Duchess of the မင်္ဂလာပွဲ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိနိုင်သောအဓိပ္ပာယ်နှင့်သင်္ကေတဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများကိုရှာဖွေပါ။
လက် ၀ တ်ရတနာမှသည်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ရုံအထိ Sussex ၏ Duchess of the မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့သည်လျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်းသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Getty Images ကနေတွေကို embed
Aနာမည်ကြီးသောမင်္ဂလာပွဲများနှင့်အတူဖြစ်သည့် Ms Meghan Markle နှင့် HRH မင်းသားဟယ်ရီတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကပွဲကျင်းပချိန်၊ ဝှက်ထားသောအဓိပ္ပါယ်များ၊ သတို့သမီး၏မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ၊
အချို့မှာအတော်လေးရယ်စရာကောင်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အခမ်းအနားကျင်းပသည့် Windsor Castle ရှိစိန့်ဂျော့ခ်ျချာ့ချ်တွင်ကျန်ရှိနေသောဗလာကျင်းထိုင်ရာကိုအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထို ထိုင်ခုံ ဘုရင်မကြီးကွယ်လွန်သွားသောမင်းသမီး Diana ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဗလာကျင်းကျန်ရစ်ခဲ့သော်လည်းဘုရင်မကြီးရှေ့မှောက်တွင်ဘုရင်မအားအပြည့်အဝကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်တွေ့ခွင့်ရရန် ပို၍ ရိုးရှင်းပါသည်။
အဆိုပါ Tiara ။
Duchess ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အထင်ရှားဆုံးရတနာနဲ့စတင်ကြပါစို့။ မစ္စ Markle သည်မည်သူမျှမဝတ်ပါကမည်သို့ဝတ်ရမည်ဟုထင်မြင်ချက်များစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံးတော့သူမရဲ့ကုလားကာကိုတာရာရာနေရာမှာထားဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ် ဘုရင်မမာရိရဲ့ Bandeau Tiara.
ထို့အပြင် 'Filigree Tiara' ဟုလည်းလူသိများပြီး HM ဘုရင်မ၏သတို့သမီးကိုငှားရမ်းသည်။ ပလက်တီနမ်နှင့်စိန်တာရာတာများသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် (ထိုရတနာသည်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ) ၎င်းသည် ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှစ၍ ထူးခြားသော Art Deco အပိုင်းအစဖြစ်သည်။
၎င်းကိုအပိုင်း ၁၁ ပိုင်းပါ ၀ င်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တီးဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Kensington နန်းတော်.
Queen Mary Bandeau tiara, ၁၉၃၂ Royal Collection Trust ။
ဘုရင်မမာရိက bandeau tiara ။ ဘေးထွက်မြင်ကွင်း။ တော်ဝင်စုဆောင်းမှုယုံကြည်မှု။
တာရာရာ၏ဗဟိုတွင် ၁၈၉၃ ခုနှစ်မှ စ၍ ဖြိုဖျက်နိုင်သောစိန် ၁၀ လုံးလက်ဝတ်ရတနာရှိသည်။
ဘုရင်မမာရိက bandeau tiara ။ တောက်ပသောစိန် ၁၀ လုံးနှင့်အတူဗဟိုဖြုတ်တပ်နိုင်သောဘရိုရှာ။ တော်ဝင်စုဆောင်းမှုယုံကြည်မှု။
ဒီစိန် bandeau ကို Teck ဘုရင်မမေရီအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၈၉၃ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့စိန် ၁၀ ပုဒ်ဝတ်ဆင်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဘရွတ်ခ်ကိုမင်းသမီးမင်းသမီးအား ၁၈၉၃ ခုနှစ်မှာဂျော့ခ်ျမင်းသားဂျော့ခ်ျနဲ့လက်ထပ်တုန်းကမင်းသမီးကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
bandeau tiara ကို ၀ တ်ဆင်သောမိဖုရားမာရိသည် HRH မင်းသားဟယ်ရီအားမင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တွင် HM ဘုရင်မအား Ms Markle အားငှားရမ်းခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်ဘုရင်မမေရီကွယ်လွန်သောအခါ၊ တာရာနှင့်ဘရိုရှာနှစ် ဦး စလုံးအားသူမ၏မြေးဖြစ်သောဘုရင်မသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ တွင်မင်းသမီးမာဂရက်နှင့်အတူတာရာတာကိုအများပြည်သူရှေ့တွင်နောက်ဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာ Teck ဘုရင်မ Mary သည်ဘုရင်အက်ဒွပ် (၈) ၏မိခင်ဖြစ်သည်။ သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်နှင့်ကွာရှင်းပြတ်စဲသူ Wallis Simpson နှင့်လက်ထပ်ရန် ၁၉၃၆ တွင်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဤတာရာသည်သည်းခံခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အသစ်သောအရာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အလိုအလျောက်သတင်းစကားကိုပေးပို့ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
တာရာ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားမိလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဘုရင်မမေရီသည် Simpson ကိုဘယ်သောအခါမှလက်ခံခြင်းမရှိကြောင်း၊ သူမအနေဖြင့်လူသိရှင်ကြားနှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံရန်အမြဲငြင်းဆန်ခဲ့သည်၊ Ms Markle နှင့် Ms Simpson အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ ဤအရာသည်ဤနေရာတွင်မဆွေးနွေးရ။
ဖော်ပြနိုင်သည့်အချက်မှာဤတာရာသည်သတို့သမီးဝတ်စုံ၏ချောချောမွေ့မွေ့သောဖြတ်တောက်မှုကိုအများဆုံးခံယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရတနာ၏သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသော Art Deco လိုင်းများသည်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ရုံ၏စင်ကြယ်သောလိုင်းများနှင့်အလွန်ကိုက်ညီသည်။
ဘုရင်မမာရိရဲ့ bandeau tiara နဲ့အတူသတို့သမီးတစ်ထည်လည်းဝတ်ဆင်ခဲ့တယ် မှစိန်ပုတီး Galanterie က de Cartier စုဆောင်းမှု - ပြီးသားရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအစောပိုင်းကမင်္ဂလာဆောင် sported - နှင့်ထိပ်တန်း ကနေစိန်လက်ကောက် Cartier ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှု စုဆောင်းမှု, ညနေခင်း reception ည့်ခံဘို့ကိုက်ညီနားကပ်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွား။
Galanterie က de Cartier နားကပ်။
၁၈ ကီလိုရွှေဖြူ၊ ရွှေတောက်ပသောစိန်တစ်လုံးစီကို ၀.၁၈ မှ ၀.၂၂ ကာရက်နှင့် ၀.၄၀ မှ ၀.၄၄ ကာရက်ဖြင့်ရရှိပြီး၊ တောက်ပသောစိန်များဖြင့်ခင်းထားသည်။
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုက de Cartier လက်ကောက်။
၁၈ ကာရက်ရွှေဖြူ၊ ၄၁.၅ ကာရက်ရှိပြီးတောက်ပသောစိန် ၁၀၄ လုံးနှင့် ၅.၆၁ ကာရက်ရှိစိန်ပွင့် ၅၂ လုံးရှိသည်။
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုက de Cartier ပုတီး။
၀.၈၁ ကာရက်၊ စုစုပေါင်း ၀.၁၈ ကာရက်၊ အိတ် ၁၀ လုံးနှင့် ၁.၀၈ ကာရက်ရှိရွှေမော်ဒယ်ကြီး ၁၈K ဖြူရွှေ၊
သတို့သမီးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တီးဝိုင်းရိုးရာဝလေရွှေဖြစ်ခဲ့သည်ဘုရင်မထံမှလက်ဆောင် - ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် George VI နှင့် Elizabeth Bowes Lyon (ဘုရင်မ၏မိခင်၊ မင်းသမီး၏အဖွား) ၏မင်္ဂလာပွဲသို့ပြန်ရောက်သည့်တော်ဝင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ
အောက်ကပုံထဲမှာ, မင်္ဂလာဆောင်တီးဝိုင်းနှင့်အတူလိုက်ဖက်သည် စေ့စပ်လက်စွပ်မင်းသမီး Diana ၏ရတနာစုဆောင်းမှုမှသေးငယ်သောစိန် ၂ ခုနှင့်တွဲဖက်ထားသောဘော့ဆွာနာ (Prince of Harry) မှရရှိသောဗဟိုခေါင်မိုးဖြတ်တောက်ထားသောစိန်ပါရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အနည်းဆုံးတော့အသစ်ပြုလုပ်ထားသော Sussex Duchess ၏ညနေခင်း၌ to ည့်ခံပွဲတက်ရန်ထွက်ခွာစဉ်လှပသောငါးမျှားသည့်လက်စွပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပုံရသည်။ ဤလက်စွပ်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာမှပေးအပ်ခဲ့သောလက်စွပ်တစ်ကွင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် Asprey လန်ဒန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်ဆောင်အဖြစ် Duke အားဖြင့် Sussex ၏ Duchess ၏ပေးသော။
အဆိုပါ bandeau tiara ကနေအရပျ၌ထားကုလားကာရန်။
Duchess of Sussex ၏ရထားသည်၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါစွာဖြင့်တည်ရှိသည်။
A ကုလားကာရှည်လျားသောငါးမီတာပိုးချည်နှင့် organza တွင်လက်ဖြင့်ပန်းထိုးပန်းများဖြင့်ချည်ထားသောပိုးကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အလွန်အရေးကြီးသောနှင့်အဓိပ်ပာယျအပြည့်အဝတစ်ကုလားကာ။ ၎င်းအတွက် Duchess သည်ဓနသဟာယမှပိုင်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံ ၅၃ ခုကိုသူတို့၏သီးခြားအပင်များဖြင့်ကိုယ်စားပြုပြီးအားလုံးသည်ပန်းတစ်ပွင့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည် - ထိုအခါသမယတွင်သူမနှင့်အတူရှိနေရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့သတို့သမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံ။ ပြင်သစ်ဖက်ရှင် Maison of Givenchy ကို ဦး ဆောင်သူအမျိုးသမီး Claire Waight Keller မှဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
Sussex ၏ Duchess of the မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ။ Kensington နန်းတော်မှထုတ်ဝေသောပုံ။
ဗြိတိသျှတို့၏အရည်အချင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် Duchess သည်မစ္စ Waight Keller နှင့်သူမအတွက်“ အချိန်ကုန်သက်သာပြီးလှပသောရသ၊
ဤအချက်တွင်ဖက်ရှင်သတင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များညွှန်ကြားရေးမှူး Bethan Holt နှင့်သူမ၏အပိုင်းကိုကိုးကားဖော်ပြလိုပါသည် the Telegraph မှသူမပြောတဲ့နေရာမှာ
"T ကသူသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်စိန့်ဂျော့ခ်ျဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်၌ပင် Duke Of Windsor ၏ဈာပနအခမ်းအနား၌ Givenchy အားအဓိကဇာတ်ကောင်များ၏နောက်ကျောတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူ၏မုဆိုးမဖြစ်သူ Wallis Simpson သည် Hubert de Givenchy တစ်ညလုံးသူမအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖောက်သည်များဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောအမည်းနှစ်ထပ်ပါသောအနက်ရောင်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်ပိုးထည်ကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်အက်ဒွပ်ကိုစွန့်ခွာရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောကွာရှင်းထားသောအမေရိကန်ဖက်ရှင်ပန်းချီကားသည်မိန်းမဖြစ်သည့်တော်ဝင်မိသားစု၏အေးခဲနေသည့်နောက်မက်ဂဲန်းသည်ဟီရီနှင့်ဆက်ဆံစဉ်ကတည်းကစတိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည့်ဒီဇိုင်းအိမ် ၄၆ ကိုအတူတူရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နှစ်တွေကြာပြီးနောက်။"
Tags:မြင့်မားသောရတနာ • တော်ဝင်ရတနာ • မူပိုင်
“ မှတ်ချက် ၁ ခုအဆိုပါသတို့သမီး & ရတနာ"
Pingback: Tiaras၊ ကျောက်တုံးသုံးခု၊ HIGH ရတနာအိပ်မက်